Mpanamboatra sy mpamatsy plastika China | ROC
ROCPLEX plastika plastika dia plywood fampiasana tsara kalitao rakotra plastika 1.0mm izay mivadika plastika miaro mandritra ny famokarana. Ny sisiny dia voaisy tombo-kase amin'ny loko akrilika azo zahana rano.
Kitapo plastika vita amin'ny maotera miaraka amina kalitao sy azo ampiharina ny plastika plastika, be mpampiasa amin'ny fananganana trano, fanamboaran-dàlana, tetik'asa lehibe vita amin'ny beton, taratra tetezana sns.
Kitapo plastika ROCPLEX PPE rakotra fonosana polypropylene amin'ny lafiny roa amin'ny hatevin'ny 1.6 mm.
Ny paty dia mampihena tanteraka ny fitrandrahana ny plastika amin'ny hamandoan'ny tabilao formwork.
Fananana hazo raha ampitahaina amin'ny fiarovana amin'ny sisin-dranomasina mahazatra: palitao roa vita amin'ny akrilika tsy tantera-drano.
Kitapo plastika ROCPLEX ho an'ny formwork mahery, mafy orina
Antsipirian'ny plastika ROCPLEX
Tarehy sy lamosina
0.8mm plastika lafiny roa
Lakaoly MR, lakaoly WBP, lakaoly Phenolika
4-28mm (hatevin'ny mahazatra: 12mm, 15mm, 18mm, 21mm)
ROCPLEX plastika tombony tombony
Raha atao anaty rano mangotraka mandritra ny 72 ora dia mbola mipetaka amin'ny lakaoly ary tsy misy endrika.
Ny toe-tsaina ara-batana dia tsara kokoa noho ny lasitra vy ary afaka manome fahafaham-po ny fepetra takiana amin'ny fanamboarana bobongolo, ny vy dia mora simba ary tsy afaka mamerina ny laoniny na dia efa manamboatra aza.
Raha ampiasaina hanaraka tsara ny sary dia azo ampiasaina mihoatra ny in-50.
Mampihena be ny vidiny ary manalavitra ny fatiantoka azo avy amin'ny (bobongolo vy ary mihalefaka).
Mamaha ny olan'ny tafaporitsaka sy ny faritra misavoana mandritra ny fanamboarana.
Mety indrindra amin'ny fanondrahana tetik'asa vita amin'ny beton, afaka manamboatra sy mamelatra ny velaran-tany.
Kitapo plastika ROCPLEX Mitsitsia fotoana, asa ary cos
Kitapo plastika ROCPLEX Mitsitsia vola
Mahaiza manokana ny lakaoly sy ny sarimihetsika fenolojia
Ny horonantsary niatrika horonantsary dia azo esorina ary ampiasaina matetika ho an'ny tarehy roa, mitahiry 25% amin'ny vidiny.
Optimization ho an'ny sokajy manokana an'ny core
Mahaiza manokana amin'ny adhesive
ROCPLEX plastika plastika Hanafoanana ny faharetana
Vokany tsara amin'ny demoulding
Ataovy fohy ny 30% amin'ny faharetana.
Sorohy ny fanarenana ny rindrina
Mora manangona sy mifangaro
ROCPLEX plastika plastika ny kalitaon'ny casting tsara
Ny tarehy fisaka sy malama
Ny tarehy dia fisaka sy malama, hisorohana ny fandatsahan-dra ny sisa tavela amin'ny miboiboika sy beton.
Ny firafitry ny tantera-drano sy ny breathability
Voalamina tsara ny sisiny
Fitaovana plastika vita amin'ny plastika ROCPLEX
Sarimihetsika ROCPLEX Niatrika Kisarisary Voamarina nataon'i
Previous: Fanangonana kitapo